Caamsaa 20 Gaadituu Bilisummaa Saboota Cunqurfamoo « QEERROO
Caamsaa 20 Gaadituu Bilisummaa Saboota Cunqurfamoo
Caamsaa 28 2017
Ilmaan gita bittuu Habashaa, egeree saboota cunqurfamoo keessattu sabota hidda Kush(Numibiyaa) haqaaquun maksuuf tattaafachaa turuun nii yaadatama. Aadaawwaan sabichaas kansaanii tasifachaa afaan saboota kanaallee bakka bakka walitti funaanuun afaansaanii godhaachaa as gahan. Ilmaan garboonfattootaa kun kanneen walqixxummaa sabaatti hinamanneef; kanneen olaantummaa isaanii qofa mul’ifachuu barbaadan yoo ta’u. Saboota biroo biyya Xoopiyaa jedhamtu kana keessaa barbadeessuuf irratti hojjechaa turuunsaanii seenaan nii yaadata. Saba tokkoon afaankee hindubbatin afankoon dubbadhu jechuun hanga arraba irraa muranitti gahaa turan. Kana fakkenya goonee yeroo mara kaasuu kan qabnu uummata Oromoo Raayyaa Qobboo jiraatuuf, Wallo Kamisee keessaa kaasuun nii danda’ama. Gochaawwaan ilmaan oftuultotaa kanaan Oromoon baroota darbaniif aangaa’ota Habashaa darban keessatti gootota hedduu dhabee jira. Afaan keessan hindubbattan jechuu qofaaf saboota Oromoo bakkeewwaan , Raayyaa Qobboo, Wallo kamisee, Goojjam Mattakkal, Kafaa ( har’allee sirna bittaa Wayyaanee kana keessatti mirgi isaanii kan kabajaamaa hinjirre) fi kkf keessa jiraatan irratti duguuggaa Aadaa, seenaa, afaaniif sabaa dalagaa as gahuun isaanii nii yaadatama.
Har’as guyyaa har’aa kana Oromoon akkamitti beekuu qabaa? Keessattu Qeerroon akkamitti hubachuu qabnaa? Kan jedhuuf guyyaa Dorrobni garbummaa itti dhalatee lafa qabate ta’uu hubachuu nu feesisa. Burjaajoftuun wayyaanee saba kana har’a akka feete cabsitee bitaa jirtu, akka feete hiitee ajjeeftee jiraachaa jirtu. Qabsoo Oromoota kaleessaa dhuunfachuun abbummaa qabsoo taa’uun, saboota cunqurfamoo harkaa Bilisummaa isaa gadii’uun waggoota lakkaahachuu eegaltedha. Bu’aaan Caamsaa 20 Oromoof hayyuuwwaan akka Dabbasaa Guyyoo, Nadhii Gammadaa, Tasfaahuun Camadaa fi kkf Artistoota akka Jireenyaa, Eebbisaa Addunyaa,Usumaayyoo Muusaa fi kkf, Qeerroowwaan egeree biyyaa suphuuf malan, kanneen akka Jagamaa Badhaanee, kabbadaa Buzunash, Dirribee fii kkf kitillaayyoo ilmaan Oromoo Hagayya 6, 2016 rasaasa Wayyaaneen dhabee, ji’aa muraasa gidduutti uummata kumaan lakkaahamu Ayyaana Irreechaaf baanee Kumaan lakkoofnee of cinaa utuu ilaalluu dhabne, kun Oromoof bu’aa caamsaa 20ti. Bu’aan caamsaa 20 waan dagatamuu hinqabne bara buchullaan OPDO Junaddin Saaddoon hogganamtu akka fedhan sochoosanii teessoo burjaajoftuu OPDO Finfinnee kaasanii Adaamaatti dabarsan, qaroowwaan barattootaa Yuunibarsiitii Finfinnee hiriira nagaa bahan 300 ol mana barumsarraa ala goosisuun irrattuu midiiyaa as bahuun bara Junaddin “anamni 300 ari’amuun uummata kana waan miidhu hinqabu, barataa kitilaa barsiifnee bor rakkachuu keenyarra barata miseensa keenya ta’e 3 barsiifnee eebbisiisuu nuuf wayya” jedhe dhadate. Bara qaroowwaan biyyaa danuun waaan gaaffii mirgaa gaafataniif qofa hidhaan umurii guutuu itti murtaahee mana hidhatti gidirsiise, kunniin illee bu’aa caamsaa 20ti Qeerro.
Wayyaaneef guyyaan har’aa guyyaa saamichaaf aanja’eef, guyyaa akka barbaaddu burraaqxee uummata bal’aa kana saamtu ta’ullee; Oromoof saboota Cunqurfamoo biyyattiif guyyaa eenyummaa isaaniirraa doombii keessee teesse ta’uu hubachuu nu feesisa. Nuti Oromoon guyyaa kana kan ittiin yaadannu, guyyaa fokkiftuuf jibbamtuu hawwaasa keenya qaroo ol adeemaa nu duraa dhabsiifte ta’uu beekuu qabna. Nuti Oromoon yoomiyyuu guyyaa kana gammachuun utuu hintaane booree fudhachuun guyyaa haaloo kuufannaa taasifachuu qabna. Kaleessa qabsaa’onni bilisummaa Oromoo arcaatuuwwaan Tigiree har’a biyya wareertee jirtu kana hamma mixiitti lakkaahaa akka hinturre dhagaa’aa guddanne. Qabsoon uummata keenyaas qabsoo buchulloota Wayyaaneef Qabsoo TPLF akka dursu ijoollummaarraa kaafnee dhagaa’aa guddanne. Qabsoo har’a garboonfattoonni Wayyaanee itti bargaanfatanii diiriirfatanii akka Silmii daandii Diimokiraasii jettuun qaabenya uummata keenyaa xuuxaa jiran kun kan abboonni keenya lafee itti cabanii Humna waraanaa Darguu biyyaa ari’atnii irratti hannaa qabsoon barcuma yaabbatanii sanuu waggaa waggaan dhiichisaa as gahan baroota dhiyoo asitti Qeerroon wal tumsuun ayyana diinaa kana busheessaa dhuufuun argaa dhageettii keenya jala waan jirudha. Qeerroo ta’us waan guddaan nurra jiru ammallee tarsiimoo diinaa daangaa cabsee, lafees cabsee dhiiga uummata keenyaa xuuxu kana barbadeessu bafanne socho’uun nurra jiraata.
Caamsaa 20 Gaadituu bilisummaa uummata Oromoof saboota cunqurfamoo ta’uu beekuun keenya akka diina kana konkolaachifnuuf humna jabaa nuuf ta’a. Nuti har’a akkuma tokkummaa keenyaan diinummaa sobdootaaf buchulloota diinaa addunyaaf labsine, ammo qaarisiisuun walabummaa keenya gonfachuuf ciminaan Kaayyoo abboota kaleessaa tirsiisuu nu gaafata. Wayyaneen dhiichisa ishee kana dhiyootti adiyyoomuu isaa hubachuu qabdi. Kunimmoo cimina hawwasa biyya keessa jirruuf jabina Qeerroo gafata.
« Riqicha-Gaaffii fi Deebii Addaa HD ABO, Ob Daawud Ibsaa -Kutaa 2ffaa
ONN: Gaaffii fi Deebii Itti Aanaa HD ABO Jaal Dhugaasaa Bakakkoo waliin »